“အတွေးစလေးတွေ”: “ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း . . . ”
Posted by Han Kyi at 2:58:00 pm
မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေတာ။ ဟို မြောက်ကုိုရီးယားက သမ္မတလေး ကင်ဂျုံအန် ပုံစံ ပေါက်နေလားလုို့။ ဟာ ဟ။
တနုိုင်ငံလုံး သူ့ဆံပင် ပုံစံချည်း ညှပ်ရမယ် ဆုိုလားဘဲ။ အတော်လာတဲ့ ကောင်လေး။
ဆရာဟန်က ခန့်ပြီးသားဆုိုတော့ ဆံပင်တုိုတုိုညှပ်လေလေ မူလအလှတရားပေါ်လာလေပေါ့ ဆရာဟန်။ ညှပ်ပစ်လုိုက်ပစေ။ တုိုလေကောင်းလေပေါ့ ဆရာဟန်း)
ထုံချိုင်းကေ ဒွေးကေ များနဲ့ ဆရာဦးဟန်ကြည်ပုံကို အစားထိုးပြီး မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် ဖတ်ရင်းပြုံးရင်းနဲ့
ဆယ့်လေးငါးနှစ်ထိ အမေ့စိတ်ကြိုက် ဗိုလ်တေဇကေပဲညှပ်ခဲ့ရတယ် သင်တုန်းဓါးနဲ့ ဗျီုးဗျီုးဆွဲရိတ်ရင် အရေခွံတွေလှန်ပါသွားမှာ အမြဲကြောက်ရပေါ့ဗျာာာ
15 August 2014 at 00:24
Whether you want to go onagluten-free diet because you have to or because you want to, it's important to
know that restricting gluten from your diet isn't easy.
My web site ... Gluten Free Society